ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ရာထူးက နှုတ်ထွက်ပြီ | Freedom News Group
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ရာထူးက နှုတ်ထွက်ပြီ
by FNG on April 4, 2011	“အာဏာရှင်တွေ ဟာ သူတို့ ဘယ်လောက်ပိုင် သလဲ ဆိုတာ သူတို့ ပြည်သူ နဲ့ ကမ္ဘာ ကို ပြချင်ကြတယ်…
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် အဖြစ် မှ ယနေ့နှုတ်ထွက် သွား ပြီ ဟု Freedom News Group မှ သတင်း ရရှိသည်။ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေသည် လက်ရှိ ရာထူး ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
စောမောင် မှ တစ် ဆင့် ဆက်ခံ ထားဖြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်း နှစ်ရှည် လများ ယူထားသည့် ရာထူး ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် က ဒု ဗိုလ် ရာထူး အဆင့် သာ ရှိသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်း
အောင် လှိုင် ကို မတ် လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် လွှဲပြောင်း ပေး အပ် ခဲ့သည်။
အသက် ၇၈ နှစ် အရွယ်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး သန်းရွှေ မှာ နိုင်ငံ ၏ အာဏာ ကို နောက် ကွယ် မှ နေ၍ ဆက်လက် ချုပ်
ကိုင် ထား မည် ဟု နေပြည်တော် ရှိ အစိုးရ အရာ ရှိ အသိုင်း အ၀ိုင်းက ယုံကြည့် ကြသည် ဟု Freedom News Group
မှ သတင်း ရရှိသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေသည် သူ၏ စစ် တပ် ရာထူး အဆင့် ဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ် မှုးကြီး ရာထူး ကို လည်း စွန့် လွှတ်လိုက်
ခြင်း ဖြစ်သည်။ စစ်မှု ထမ်း သက် ၅၄ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သည့် စစ်သား အို ကြီးသည် နိုင်ငံ ရေး လှုပ်ရှား သူ နှစ်ထောင် ကျော်
ကို ဖမ်းဆီး အကျဉ်း ချထား ပြီး ၎င်း ၏ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် ၃၀၀ ကျော် ကို သူ၏ အာဏာတည် မြဲ ရေး အတွက် ဖယ်ရှား
ကာ ၊ ရှစ်ရာ ကျော် ကို ထောင် သွင်း အကျဉ်း ချထားသည်။
သူသည် စစ်ခေါင်း ဆောင် အဖြစ်တာဝန် ယူ ချိန် တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာ များ ကို ဖယ်ရှာ ရာ ဉ် မုဒိမ်းမှု ကို လက်နက် သဖွယ်
ကျင့်သုံးသည် ဟု အတိုက်အခံ အဖွဲ့ နှင့် လူ့ အခွင့်အရေး အဖွဲ့ များ က စွပ်ဆွဲကြသည်။
မြန်မာ ၀ီကီ လိခ် တွင် လည်း ဖတ်ရှု နိုင်သည်။
AFP – Myanmar strongman Than Shwe, who ruled with an iron fist for almost two
decades, has retired as head of the military after handing power toanominally civilian government,
You: Than Shwe retires as head of Myanmar military (france24.com)
Tags: Agence France-Presse, Aung San Suu Kyi, Burma, Myanmar, Than Shwe, Thein Sein	From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← နေရွှေသွေးအောင် ၏ သင်္ကြန် မဏ္ဍပ် ပြည်လမ်း တွင် ဆောက်လုပ်
မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် ဆင်းရဲ/ချမ်းသာ ကွာဟ မှုကြီး မားနေ →
kTT ရေ အဲသူတောင်းစားတွေကို ဆော်ထည့်လိုက်ဗျာ။ နောက်လာပြီးမတောင်းရဲအောင်။
April 11, 2011	KTT	#
ကျနော်တို့ရန်ကုန်တိုင်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်ကစည်ပင် ရဲတွေအကြောင်းပေါ့ဗျာ သင်္ကြန်တွင်သူတို့ စားသောက်ဖို့အတွက် အကြောင်းပြ ပီး လိုင်စင်ရ..သူတောင်းစားယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပီး တစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်ထွက် အနဲဆုံး ၂၀၀၀ကျပ် ဆိုပီလိုက်တောင်းနေတယ်ဗျာ…မြို့တော်ဝန်ရေ …ဘာလုပ်နေလဲ ကွ
April 7, 2011	old lorry	#
သူ့ ကို ပေးမသေစေချင်သေးပါ
သူနဲ့ သူ့မိသားစု လုပ်ခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေ ပြန်ခံခိုင်းဖို့ရှိသေးတယ်လေ
April 5, 2011	free	#
အော်… အဲဒါ သင်္ခါရ ဘဲနော်…သေတဲ့အခါလဲ အသေဖြောင့် ပါစေ… စိတ်သဘောအတိုင်း (….. )စေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ပြည့်မပြည့်တော့ ယမမင်းဘဲသိလိမ့်မယ်….
April 5, 2011	နွယ်	#
သူ့ ကိုတော့ မြန်မြန်သေစေချင်သား။ ငရဲမှာ ဘ၀တိုင်း အကျဉ်းကျခံရမဲ့သူဘဲ ဖြစ်မှာဘဲ။ လွတ်လမ်းမရှိ။ သံဃာသတ်၊ လူသတ်တဲ့သူ၊ အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကို မိသားစုပါမကျန် ဒုက်ခရောက်စေတဲ့အတွက် ငရဲမှပတဲ့အချိန်ရောက်ခဲ့ရင်တောင် ၀င်ုမှာတော့ အမြဲနေမှာဘဲ။
April 5, 2011	Alfred Aung Myin Myint Ngala	#
Good, right and actual news.
thanks to FNG
April 4, 2011	သာဓု	#
နေ၀င်းလည်း နောက်ကွယ်မှာ ၁၂ နှစ်လောက် နေနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။ သန်းရွှေကတော့ အဲလောက်ခံမယ်မထင်ဘူး။ (မထင်တာပြောတာပါ)။ တို့အဖေကြီးကို ကာကွယ်မလေ ဆိုပြီး ၀ိုင်းအာဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့။ မောင်ရင်တို့လည်း ထင်ချင်သလိုထင်လို့ရပါတယ်။
April 4, 2011	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,513,810 hits
I saw my reflection inaglass door of Michael Mann studio at Santa Monica, wow I was young enough. Photography by D… lnkd.in/bKVcdAu 16 hours ago
#Nelson Mandela should born and raise in Utah. lnkd.in/b-mPUbP 17 hours ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar's president asks Philippines for more aidMyanmar to allow foreign banks to begin some operations next yearMyanmar's president calls for more investment, development aid from PhilippinesUndergrads return to crumbling Myanmar universitySpecial Report: Thailand secretly supplies Myanmar refugees to trafficking ringsMyanmar refugees face land challenges on returnMyanmar President cites Pinoy resiliencyUS seeks greater Myanmar military trainingWant Burma info in your inbox each morning?